Ilhaan iyo Rashida : Hablaha Muslimiinta ah ee galaya Aqalka Congress-ka Maraykanka | Sahan Media Group
Ilhaan iyo Rashida : Hablaha Muslimiinta ah ee galaya Aqalka Congress-ka Maraykanka
Taageereyaasha xisbiga dimoqoraadiga ayaa Ilhan Cumar u doortay in ay noqoto musharaxa xisbiga ee kursiga Aqalka Congress-ka ee doorashadiisa la qaban doono bisha Novembar.
Waxa uu tartan dhexmari doonaa musharax ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Donald Trump, balse sida uu tabiyay taleefishinka CNN, waxa ay u badantahay in ay Ilhaan guuleysato maadaamaa meesha ay ka tartamayso ay taariikh ahaan tahay meel uu xisbiga dimoqoraadiga ku xoog badanyahay.
Haddii ay guuleysato, kaliya ma noqon doonto qofkii koowaad ee Soomaali ah oo gala Aqalka Congress-ka, ee sidoo kale waxa ay noqonaysa mid ka mid ah labada haween ee kaliya ee muslimiinta ah ee galaya Aqalka sharci dajinta Maraykanka ebed.
Waxaan dib u jaleeceynaa guusha Ilhaan iyo arrimaha ku gadaaman
Ilhaan waxa ay kusoo hagaagtay casrigii madaxweyne Donald Trump oo loo jeediyay eedeymo badan oo ku saabsan tallaabooyin uu qaaday oo loo fasirtay in uu islaamka lid ku yahay, waxaa ka mid ah mamnuucistii socdaalka ee 7 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay in muwaadhiniintooda ay u safraan Maraykanka.
Go’aankaas horay ayay Ilhaan Cumar oga hortimid, waxayna sheegtay in ay la dagaalami doonto Trump sida uu faafiyay taleefishinka CNN.
Xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, sanadkii 2016-kii, Trump ayaa laga soo xigtay haddalo lid ku ah Soomaalida, wuxuuna yiri “Halkan Minnesota, waad aragteen dhibka ka dhashay nidaamka qaabilaada qaxootiga, tiro badan oo qaxooti Soomaali ah ayaa gobolkan yimid idinka oo aanan ka warhaynin, islamarkaasna aanan ogolaanin”.
Sida uu qoray wargayska Guardian oo soo xiganaya tirakoobyo ay samaysay dowladda Maraykanka, 85,000 kun Soomaali ah ayaa ku nool gobolkaa , tirakoobka oo la sameeyay sanadkii 2010-kii oo hadda laga joogo 8 sano. waana gobolka tirada ugu badan ee Soomaali ah ay ku nooshahay dalka Maraykanka.
Waxyar kadib markii ay ku guuleysatay codad gaaraya 48%, ayay tiri “Waxaan biloownay olole aan ku cadaynayno in dadka ay diyaar u yihiin in ay u dagaalaan in la helo America dadka oo dhan u shaqayso, qof kasta oo ka qeybqaatay hawshan, guusha isagaa leh, wadajir ayaan degmadeena horey ugu marin karnaa”.
Waxyaabaha ay horey u balanqaadday in ka shaqayn doonto sidii sare loogu qaadi lahaa mushaarka shaqaalaha, meesha ugu hooseyso oo qofka saacadii ku shaqeeyo uu u noqon lahaa $15.
Lama oga sida ay isula jaanqaadi doonaan dowladda aqlabiyadda haysata ee Trump ee muujisay in ay kasoo horjeeddo aragtiyada ay matasho Ilhaan, oo marna soo galooti ah, marna Islaam ah.
Ilhaan iyo Rashida Dhaalib
Ilhaan oo kaliya ma ahan haweenka muslimka ah ee taariikhda ka samaynaya dalka Maraykanka, ee waxaa jirta haweenay asal ahaan kasoo jeeda dalka Falastiin oo lagu magacaabi Rashiida Dhaalib.
Rashiida waxa ay ku guuleysatay tartanka isreereebka xisbiga dimoqoraadiga ee Detroit, waxaana la hubaa in ay guuleysan doonto maadaamaa aysan jirin musharax jamhuuriga ah oo kursigaas kula tartamaya bisha November.
Labada gabdhood waa saaxiibo, midba midda kale ayayna taageertay, waxaase intaas u dheer in labaduba ay wada taageersanyihiin qadiyadda reer Falastiin.
Wargeyska Israa’iil kasoo baxa ee Haaretz ayaa soo qorey in Ilhaan horey looga xigtay haddalo ay ku garab istaagayso dadka reer Falastiin, islamarkaasna ku cambaareynayso xad gudubyada Israa’iil.
Sida uu tabiyay taleefishinka CNN, Ilhaan Cumar ayaa dowladda Israa’iil ku tilmaamtay ‘midab takoor’.
Rashida ayaa ka hambalyaysay guusha Ilhaan, waxayna tiri “Ma sugi karo in aan arko labadeena oo gacmaha is haysta, oo Aqalka Congress-ka dhex joogna”.
Waxa ay u muuqataa in labaduba ku baraarugsanyihiin baahiyaha dadka ay matalaan, iyo culeeska mas’uuliyadda fuushay ay leedahay.
Dowladda Maraykanka ayaa ah saaxiibka ugu weyn ee Israa’iil, inkasta oo marar badan ay hawlo dhexdhexaadin labada dhinac ka gashay, haddane talaabadii dhawaan uu qaaday Trump ee uu safaaraddiisa ugu raray Qudus ayaa ka caraysiisay dad badan.
Lamana oga sida qadiyadda reer Falastiin ay u hormarin doonaan labadan hablood.